အကြီးအကဲ၏ ယတြာနှင့် အာဏာ ( နေရဲနီ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အကြီးအကဲ၏ ယတြာနှင့် အာဏာ ( နေရဲနီ )
အကြီးအကဲ၏ ယတြာနှင့် အာဏာ ( နေရဲနီ )
Posted by အိမ်လွမ်းသူ on Nov 27, 2011 in Copy/Paste, Politics, Issues | 12 comments
ကြီးသူ ကျင့်ဝတ်သာ။ ဟု
လူ့ကျင့်ဝတ် ဆုံးမစာကို ဖတ်ခဲ့ဘူးသည်။
မင်းကျင့်တရား ၁၀ပါး ကို
ကျွန်တော်တို့သည် န ၀ တ အဖွဲ့ဖြစ်သောကြောင့်
မင်းကျင့်တရား ၁၀ပါးနှင့် အကျုံးမ၀င်ဟု
ဥက္ကဋ္ဌလုပ်သူမှ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင် ပြောသံကို ကြားဘူးသည်။
ဘီလူးနှင့် သဘက်သည်လည်း ခွဲခြား၍မရပေ။
ထိုအခါမှစ၍ ဥက္ကဋ္ဌ ဟူ၍လည်းကောင်း
လက်အောက်ငယ်သားတို့က အဘ ဟူ၍
ကွယ်ရာတွင် အမိပေး၍ ခေါ်ကြသည်။
အတိတ်က သာလွန်မင်းနှင့် ဓာတ်တူနံတူ ကျသောကြောင့်
ငါသည်ကား သာလွန်မင်း ၀င်စားသည်ဟု
မသူတော်တို့က မြှောက်ပင့် ပြောဆိုလာသောအခါ
တိုင်းပြည်ကို အာဏာနှင့် အုပ်ချုပ်၍
ယတြာနှင့် နပမ်းလုံး လေသောအခါ
ပြည်သူတို့မှာ ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက် နက်လာကာ
တိုင်းပြည်သည်လည်း ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေလေတော့သည်။
ကုန်ကျစရိတ်သည် ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖြတ်ဆောက်သော
သာမန်ပြည်သူ မိသားတစ်စု တစ်လစားစရိတ်နှင့် ညီမျှ၏။
မဆင်းရဘို့အရေး ပဲခူးမြို့၏ မဇင်းမည်သောအရပ်မှာ
သံမတူကြောင်းကွဲ မဆင်းဘုရားကို တည်၏။
မတ်ပဲအတွင်း ဆင်းရွှေကြာ မည်သောနေကြာကို
ကြက်ဆူနှင့် ကက်ကင်းရိုက်သော ယတြာမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်၏။
ကြက်ဆူတစ်ပင် ကျပ်တစ်ရာနှင့် ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌ ထံမှာဝယ်၍
မြန်မာပြည်၌ လူဦးရေ ၅၇ သန်းရှိ၏။
သဲထဲရေသွန်သော် အရာမျှ ထင်ကျန်ခဲ့မည်။
ရေထဲ သဲသွန်သော် ဘာမျှ မထင်ကျန်ခဲ့။
တေဇသမီးကို တိုင်းပြည် မပေးချင်သောကြောင့်
တေဇကို သမီးပေးခဲ့သည် ဟူ၍လည်း
မိန်းမ အုပ်ချုပ်မည်ဟု ဗေဒင်ဆရာက
မျက်နှာလို မျက်နှာရ ဆိုလာသောအခါ
နံ့သာဖြူလိမ်းကာ ထမီဇောက်ထိုးဝတ်၍ ၃ လအိပ်ခဲ့သည်။
ဒလမှ ဓနုတ်စေတီကို ထီးတင်သောအခါ
ပြည်သူ့ရှေ့သို့ အရှက်မရှိ ထွက်ကြလေ၏။
မယားလုပ်သူက မိမိကို နဖားကြိုးထိုး၍
ကြိုးကိုင်နေသည်ကိုကား သတိမှ မူမိလေစ။
သူခိုးကို သားမက်ထင်၍ ပေါင်းမိလေသောအခါ
တိုင်းပြည်အ၀ှန်း ရှိရှိသမျှ သစ်တောတို့ကား
မွေးသော မိဘမှာ တာဝန်ရှိ၏။
ပြည်သူပြည်သား ငတ်မွတ်၊ ခေါင်းပါးခြင်းသည်
နိုင်ငံတကာမှ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စကား ပြောဖန်များသော်
အခဲအရာတွင် သဲသလဲမှ တွင်းထွက် ရတနာအဆုံး
အရည်အရာတွင် နွေးနွေးရှိ၍ နံသည်မှ
မိမိသည်ပင် တရုပ်ပြည်သို့ ပြောင်းရန်အကြံနှင့်
တရုပ်ပြည်၌ အိမ်ခြံမြေတို့ကို ၀ယ်၏။
ငါ၏သားတော်ကို ငါကိုယ်တိုင် ဆုံးမပါသည်။
မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ဟူ၍မဆိုပါလင့် ဟူ၍
နန်းတော်တိုင်ကို မှီနေသော သမီးတော်တို့အား
ဤကလေး ဘာလုပ်လုပ် အရာအားလုံး
လေမျှပင် မတိုးစေရ ဟု
အာဏာနှင့် ခြောက်၍ လက်အောက်ငယ်သားတို့အား
ပုခုံးပေါ်၌ အပွင့်အခက်တို့ ဝေဆာနေသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့က
ကျုပ် လဲ ဖတ်ပြီး တော်တော်ကြိုက်မိတယ် ဗျို့ 
သို့ သော် ၊ ဘာပြောရမှန်း မသိပါကြောင်း
တန်းချွေ တို. ခွေးအုပ်စု(မှားလို.) မိသားစု တို. ကတော.လူစကားပြောတက်လို.သာလူလို.သတ်မှတ်ထားတာပါ ခွေးလောက်တောင် $စောက်ဆင်. မရှိတော.ပါဘူး ဟိုခွေးတီတောင်းဂျား လေးက ဘ၀င်တွေလေဟပ်ကာ ခွေးဇတ်တွေလဲ အမျိုးမျိုးခင်းတဲ.သတင်းတွေ ကြားရမြင်ရတာ မသက်သာတော.ပါဘူးအဲ.ဒီလို အမျိုးယုတ်တဲ.မိသားစုကို အပိုင်းပိုင်းခုတ်ကာ လမ်းဘေးသာ ပစ်ထားချင်ပါတယ်
တကယ်တော့မဟာသူရဲကောင်းနိုင်ငံကြီးက အနှစ်၂၀ကျော်ကြာ(ဗေဒင်ဆရာ၊ပွဲစား၊ရိုက်စား) များကိုနေရာပေးပူဇော်ပသနေပြီး
ပညာတတ်များ ကိုနိမ်နင်းခဲ့တာမို့ အခုတော့တိုင်းပြည်မှာရောင်းစရာလူဘဲ ကျန်ပါတော့တယ်
သြော်သြော် နိုင်ငံတော်ကြီး ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်ကိုအသက်ပေးပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်ပေါ့ ကောင်းလှောင့်တေးကောင်းလှောင့်တေး
လမ်းလည် အဝိုင်းကြီးမှာ ကြာဖူးရေပန်းလုပ်တာ…….ကြာဘူးလို့ တူငြားတွေဆိုနေလို့ ကြာပန်းဝိုင်း ဖြစ်တွားဆိုပဲ။
ပို့စ် လေးကို သဘောကျပါတယ် ၊
ဦးသန်းရွှေ ကြီး ဘယ်လို စိတ်ထားနဲ့ လုပ်ခဲ့တယ် မသိပေမဲ့ ခံလိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံရော ပြည်သူတွေရော
ဖြူကာ ပြာကာ ကျသွားတာပဲ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကို မှီအောင်လိုက်ဘို့တောင် လမ်းကြောင်းလဲ မှန်မှ တနိုင်ငံလုံးကလဲ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ ကြိုးစားကျမှ နောက် နှစ် ၂၀ ၊ နှစ်အစိတ် လောက်မှ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ကိုသစ် အမေ ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါသတရားဆိုတာ မီးခဲနဲ့ တူတယ် ဆိုတာ တကယ်မှန်တယ် ဗျ ၊ ဦးသန်းရွှေ ကြီး လုပ်ရပ်တွေက ဒေါသဖြစ်စရာတွေချည်းပဲ ဆိုပေမဲ့ လောလောဆယ် ကိုယ်က ဒေါသဖြစ်ရ စိတ်ဆိုးရတော့ ကိုယ့်မှာ ပူလောင်ရတယ် ကိုယ့်မှာ သူ့ကို ဘယ်လို လက်စားချေရမလဲ ဆိုတာ တွေးနေတာနဲ့တင် ရှေ့ကို ဘယ်လို တိုးတက်အောင် လုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ မထွက်တော့ဘူး ၊ကျွန်တော်တွေးတာကတော့ နိုင်ငံအတွက် တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းတွေ လုပ်ကြမယ် ဗျာ ၊ အာဏာရှင်တွေ ထပ်မပေါ်အောင် ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းက လုပ်ကြမယ်ဗျာ ဦးသန်းရွှေကြီးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ပြောသလို သူတစ်ခုခု ဖြစ်တယ်သာ ကြားလို့ကတော့ ပုလင်းထောင်းပြီး အောင်ပွဲခံမယ်တဲ့ ဆိုတာလို အဲဒီကျမှ အောင်ပွဲ ခံကျတာပေါ့ သူ့လမ်းသူ သွားမှာပါ
weekly eleven မှာ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် မှာ phoehtet မန်းထားတာလေး ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် “ ကျနော့် သဘောကတော့ ဒီလူကြီးက သူ့သမိုင်းကို သူရေးသွားပြီ..ကျနော်တို့ ရာဇ၀င်တွေထဲက မင်းဆိုး မင်းညစ်တွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပြေးမင်း၊ ပုဂံမင်း တို့လို ဖျက်မရတဲ့ အမဲစက်တွေနဲ့ ကျန်ခဲ့ပြီ..လုပ်ချင်တာတွေလဲ လုပ်သွားခဲ့ပြီ..တကယ် အငြိမ်းစားနားသွားတယ်ဆို၊သူ့လောင်းရိပ်က လွတ်ပြီဆိုရင်ကျန်ခဲ့တဲ့ သူတွေက ရှေ့ ကို ဆက်လျှောက်ကြပါစို့ရဲ့..လက်စားချေဖို့..ခုံရုံးတင်ဖို့တွေလဲ လုပ်နေတော့လဲ အိုကြီးအိုမကြီးကို ဗုဒ္ဒဘာသာလူမျိုးတွေပီပီ ခွင့်လွှတ်လိုက်ကြပါစို့ရဲ့ဗျာ..ဘ၀တွေ ပျက်ရအောင် ခံခဲ့ရခဲ့သူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာပေမယ့် အဲဒီခံစားခဲ့ရတဲ့ လူတွေလိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့၊ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မြန်မာလူမျိုးကွဆိုပြီး လက်မထောင်နိုင်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင်း သူ့ကို ကျနော်တို့ စိတ်ထဲမှာ သတ်ပြစ်လိုက်ကြပါစို့..ဦးစော သားမြေးတွေလိုသမိုင်းမှာ ငါ ဦးစောအမျိုးအဆက်၊ ဦးနေ၀င်း အမျိုးအဆက်၊ ဦးခင်ညွန့်အမျိုးတွေဗျ ဆိုပြီးတော့ ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ မပြောရဲလောက်အောင် သူ့မြေးနဲ့ သူ့အမျိုးတွေကို ထားခဲ့ပါပြီ..ဒါက သူ့လုပ်ရပ်အတွက် သူပေးဆပ်လိုက်ရတာလို့ဘဲ ထင်ပါတယ်..ဗိုလ်ချုပ်သမီးဗျ..ဦးသန့်အမျိုးတွေဗျဆိုပြီး သူ့ရဲ့အမျိုးအဆွေတွေ ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ ၀ံ့ဝံ့စားစား လုံလုံခြုံခြုံ သွားရဲသလားဆိုတာတော့ သူတို့သိပါလိမ့်မယ်..ကျနော့်သဘောတစ်ခုကတော့ အမှားတွေကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ခွင့်လွှတ်စိတ်နဲ့ အားလုံး လိုချင်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ၊လူမျိုးစုပေါင်းစုံ စည်းလုံးတဲ့၊ သမ္မတကအစ အိမ်သာကျွင်းတူးသူအဆုံး နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး တန်းတူရည်တူရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးဆီကို သွားကြဖို့ လက်ရှိအစိုးရ ဘဲကြီးတွေ သိစေချင်လိုက်တာဗျာ..”
အထင်မမှားဘူးဆိုရင်.. အခုဇတ်က,ကွက်တွေအားလုံးရဲ့ ဇတ်ဆရာက.. သူပဲ..။
ဟတ်.. ဟတ်… ဟတ်ချိုး…
သူကြီးကတော့ ဖွပြီး နှာစေးနေပြီ
သောက်ပြောကတော့ ရွှေမန်းတင်မောင် က တော့ ချိုမိုင်မိုင်
သန်းရွှေကို စောက်ရူးတို့ ဘာဦးနှောက်မှ မရှိဘူးတို့ ဆိုပြီး စွတ်ပြောနေကြ
သန်းရွှေဆော်ထားတာ ကိုယ့်တစ်မျိုးလုံး လိမ့်နေတာ ခင်ဗျားတို့တွေ အိုလို့ဘဲသေတော့မယ်
ကိုယ့်ဖင်မှာ ရေရွှမ်းရွှမ်းစိုနေတာတောင် ခုထိမပေါက်ကြသေးဘူး
သန်းရွှေကို စူပါ ဖိုက်တာကြီးလိုသဘောထားကြဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်
ငါကားအာဏာရဘို့ ယတြာတွေစီရင်ရတာအပြစ်မဆိုသာပေ..ငရွှေကားဤသို့ တွေး၏..
မချစ်မနှစ်သက်သောတရုတ်တို့ ရက်စက်မှုကိုပြည်သူအပေါင်းတို့ ခံစားကြရ၏..